Chii chinonzi Community College Cannabis Vocational Pilot Chirongwa muIllinois?
Zvese zvaunoda Kuti Uzive nezve Nharaunda yeKolishi Cannabis Vocational Pilot Chirongwa muIllinois
The Nharaunda yeKoreji Cannabis Vocational Pilot Chirongwa muIllinois yakagadzirirwa kudzidzisa nyanzvi dzinozogadzirisa indasitiri ye cannabis mune ramangwana. Nharaunda koreji mune ino inoreva chero yeruzhinji koreji koreji.
Kuti Illinois cannabis mutemo uitwe zvinobudirira, panofanirwa kudzidzisa vanhu vanozoshanda muindastiri. Vanhu ava havazongodzidziswa pamutemo chete, asi ivo zvakare vanozotungamirwa pamaitiro ekugadzirisa emabhizinesi e cannabis.
Izvi ndizvo zvaunofanira kuziva:
Dhipatimendi rekurima richange riri maneja wekutungamira nharaunda koreji cannabis basa rekutyaira chirongwa munyika ye Illinois. Pakazotanga mutemo munaJanuary 2020, bazi rezvekurima rinotarisira kuve nekupa marezinesi epurogiramu masere mumakoreji munharaunda mukati mehurumende.
Pakazosvika 2021, makoreji ayo achazove aine rezinesi rekupa chirongwa che cannabis anotenderwa kutanga kudzidzisa vadzidzi vanofarira. Chinangwa pano ndechekugadzirira vadzidzi kuti vapinde muindasitiri ye cannabis. Kudzidziswa kuchange kwakatarisana nezvose mubhizinesi nehunyanzvi maitiro, pamwe nenyaya dzemutemo idzo vatambi vari muindasitiri iyi vanozove neruzivo pamusoro padzo.
Haasi munhu wese chete achabvumidzwa kuita chirongwa che cannabis. Wese anenge apinda muchirongwa anofanira kuve neanosvika makore gumi nemasere ekuzvinyoresa kudzidziswa uku. Uye zvakare, pachave nezvitupa zvinopihwa nemunharaunda makoji kune avo vanhu vanobudirira kudzidziswa maitiro ekugadzirisa mabhizinesi e cannabis.
Kuburitswa kweCommunity College Cannabis Vocational Pilot Chirongwa License
Marezenisi achazopihwa kubvira gore ra2020. Makoreji ese anoda kuendesa kosi iyi achafanirwa kuendesa mafomu avo ezve marezenenzi musi waChikunguru 1 2020. Marezenesi anozopihwa pamusoro pe merit, uye bazi rezvekurima richapihwa basa basa rekuuya nehurongwa hwekugadzirisa mazita ekupa marezinesi. Zvimwe zvinhu zvichakurukurwa zvinosanganisira:
Gwara remharidzo rakajeka
Ruzivo rwechiitiko mune mbanje neminda inoenderana
5 emalayisense anozopihwa kumisangano ine vanopfuura makumi mashanu muzana-mari yepasi vadzidzi
Matanho ekudzivirira anoiswa kuitira kuti chokwadi chekuti cannabis zvidyarwa uye zvigadzirwa hazvidonhe mumaoko asiri iwo.
Urongwa hwekuisa vadzidzi vanogona kubudirira kuburikidza nechirongwa
Community College Cannabis Vocational Pilot Chirongwa Zvinodiwa
Nzvimbo dzinowana mvumo yekumhanyisa chirongwa chekutyaira dzichadikanwa kutevedzera mimwe mitemo. Chekutanga, iyo institution haizotenderwa kuve neinopfuura makumi mashanu zvidyarwa muchero panguva inoyerera chero nguva. Hapana chimwe chezvirimwa kana chigadzirwa chazvo chinotumirwa kubva kuchikoro kunze kwekunge samples dzava kuendeswa kune mahebhu. Uyezve, iyo koreji ichafanirwa kugadza mumiriri anochengeta vault log yevanhu vanopinda mune cannabis nzvimbo. Zvimwe zvinodiwa zvinosanganisira:
Kuwanikwa kunzvimbo yekukura mbanje kuchaganhurirwa. Iyo kharamu ichave inowanikwa chete kune avo vari kuita iyo cannabis kosi
Kambani yekutakura ichafanirwa chibvumirano chekutakura zvigadzirwa zve cannabis kubva munharaunda yekoreji kuenda kune yebhu.
Zvese zvigadzirwa zve cannabis zvisingagume mu lab zvinofanirwa kuparadzwa mukati memasvondo mashanu mushure mekunge zvaokohwa.
Mumiriri wefakisi anofanira kunge ari panzvimbo ye cannabis nguva dzese chero paine mudzidzi. Mutemo unotaura kuti, "Hapana mudzidzi ari kutora chikamu mune zvekoreji akada kutora chitupa anogona kunge ari munesi rezinesi kunze kwekunge mukuru wezvemitemo aripo mumuviri. ''
Kuongorora uye Month Checks neMapurisa
Kurima uye dhipatimendi remapurisa ehurumende vane mvumo yekuita cheki zvisina tsarukano pazvivakwa izvi. Iyo yekutarisa yakasarudzika ichave chete kune iyo nzvimbo iyo iyo cannabis nzvimbo iri.
Maitiro Ekuwana Kwaungaita Chedzimiriri Mucherechedzo Kadhi
Mumwe munhu anofanirwa kuendesa fomu uye abhadhare mari isingadzoserwe kuti apihwe kadhi rekuona kitambi. Kadhi rinodawo kuvandudzwa pane dzimwe nguva. Mumwe munhu achaziva kana kadhi ravo rakabvumidzwa kana kurambwa mukati memazuva makumi matatu mushure mekuendesa kwavo kunyorera. Izvo zvakakosha kuti uone kuti zvinyorwa zvese zvakakodzera zvinofanirwa kuendeswa kuitira kuti chikumbiro chipfuura.
Kana chikumbiro chikatenderwa, iye anokumbira anowana kadhi yekucherechedza mumiririri mukati memazuva gumi nemashanu kubva pazuva rekubvumidzwa. Mumiririri achadikanwa kuti agare aine kadhi rinoonekwa chero bedzi vari munzvimbo yakavharwa, "Kana nzvimbo yaanomiririra."
Ruzivo rwuri mukadhi rekuzivikanwa rinosanganisira:
Zita remuridzi wekadhi
Zuva rakapihwa kadhi
Kadhi kupera kwezuva
Nhamba yekuzivikanwa yealphanumeric. Iyi nhamba ichave ine gumi manhamba neanenge mana mavara uye mana manhamba
Iyo pepa inobata kadhi
Iri zita renharaunda yekoreji panoshandirwa kadhi kadhi
Chii chinoitika kana Mutemo Wakaputswa?
Dhipatimendi rekurima richange riine mvumo yekudzosera kadhi chero remuchakabvu kana risinganamate kumitemo sekutaurwa mumutemo we cannabis. Rezinesi rechirongwa rinogona zvakare kubviswa kana rikatyora chero zvinyorwa zvemutemo uyu. Mutemo unoti zvakare, "Bhodhi rinodzora masimba ekupa chitupa cheyunivhesiti chero yenharaunda yanga yapihwa rezinesi neDhipatimendi"
Kufambira mberi Chirevo pamusoro peMashandisirwo echirongwa chePiroti
Zvinoenderana nemutemo weI Illinois, "Pakasvika Zvita 31, 2025, Illinois Cannabis Regulation Oversight Officer, mukudyidzana neBhodi, inofanira kupa mushumo kuna Gavhuna uye General Assembly". Zvimwe zvemukati zveiyi mushumo zvichave:
Zviitiko zvekuchengetedza zvinopupurira padzimba dzese dzakabvumidzwa. Iko kunofanirwa kuve zvakare neruzivo rwakakwana rwekuti ndeapi matanho akatorwa munzvimbo dzechiitiko izvo zvinyorwa zvakanyorwa.
Statistics pane vadzidzi vakanyoresa mune chero cannabis yakanangana nechirongwa. Idzi nhamba dzinofanira kuve dziri pamusoro pevakadzi, dzinza, uye koreji yenharaunda.
Huwandu hwevadzidzi vakabudirira kupedza chirongwa che cannabis munzvimbo dzakasiyana dzeelayisensi
Statistics pamusoro pekuiswa kwebasa kwevadzidzi mushure mekupedza zvirongwa
Kana iwe uri kuda kuve chikamu cheCommunity College Cannabis Vocational Pilot Chirongwa muIllinois, iwe unofanirwa kutaura negweta rine ruzivo uyo achakubatsira iwe kunzwisisa izvo zvinodikanwa semutemo uye kukutungamira kuburikidza nehurongwa hwekushandisa.